ရော်နယ်လ်ဒိုကို မနာလိုစိတ်နဲ့ အပုပ်ချ စော်ကားခဲ့တဲ့ ဘောလုံးကြေငြာသူ ဘယ်လိုအရှက်ဗြန်းဗြန်းကွဲသွားခဲ့သလဲ? – Sports A2Z
Article • Other • Serie A
ရော်နယ်လ်ဒိုကို မနာလိုစိတ်နဲ့ အပုပ်ချ စော်ကားခဲ့တဲ့ ဘောလုံးကြေငြာသူ ဘယ်လိုအရှက်ဗြန်းဗြန်းကွဲသွားခဲ့သလဲ?
ပေါ်တိုအသင်းရဲ့ ဘောလုံးပွဲအစီအစဥ်တင်ဆက်သူတဦးဖြစ်တဲ့ ဖာနန်ဒို ဆောလ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ အဆိုပါပေါ်တူဂီကလပ်ကို အဝေးဂိုးစည်းမျဥ်းနဲ့ အရေးနိမ့်ပြီး ပြိုင်ပွဲက ထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်တိုက်စစ်မှူး ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒိုကို အောက်တန်းကျတဲ့ ဝေဖန်မှုမျိုးကို ပြုလုပ်ထားခဲ့သူပါ။
အဆိုပါ ၁၆ သင်းအဆင့် ရှုံးထွက်ပွဲစဥ်အပြီးမှာ သူဟာ ရော်နယ်လ်ဒိုဆိုတာ ဝက်တကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ စော်ကားမှုနဲ့အတူ ပေါ်တူဂီသားရဲ့ မိသားစုကိုပါ ညစ်ညမ်းတဲ့ အောက်လုံးထိုးစကားတွေကို ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ တက်ရေးပြီး လူသိရှင်ကြား ထိုးနှက်သွားခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့အနေနဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တုန်းကလည်း ဘင်ဖီကာအသင်းအပေါ် အဆိုပါအမှားမျိုးကို ကျူးလွန်ခဲ့ဖူးတာဖြစ်ပြီး အခုတကြိမ်မှာလည်း အမှတ်မရှိဘဲ အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျတဲ့ စကားပြောဆိုမှုတွေနဲ့ ထပ်မံဖောင်းထုခဲ့လို့ ပေါ်တူဂီ​ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ အရေးယူမှုကို ခံခဲ့ရပြီး နာမည်​ပျက်သွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။
ဘောလုံးပွဲကြေငြာတဲ့ မိုက်ကရိုဖုန်းနဲ့တင် မကျေနပ်နိုင်ဘဲ မိုက်ကရိုဖုန်းနောက်ကွယ်မှာပါ သွေးဆူတတ်တဲ့ သူက ” ရော်နယ်လ်ဒိုဆိုတာ မသတီချင်စရာ ဝက်တကောင်ပဲ။ ပေါ်တိုအသင်းက သူ့ကို လက်စားချေပစ်လိုက်တာ သိပ်ကျေနပ်စရာကောင်းလှတယ်။ ကျွန်တော်အရမ်းဂုဏ်ယူပါတယ်”
” ပြီးခဲ့တဲ့ အစွယ်ကျိုးနေတဲ့ သူ့အမေကြီး ဒိုလိုက်ရက်စ်နဲ့ ကျက်သရေတုံးလှတဲ့ သူ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ ဗွီဒီယိုတွေကို ကျွန်တော်စောင့်နေပါတယ်။” ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ရေးသားခဲ့သလို ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ မိခင်ကိုလည်း “အစွယ်တုံးနေတဲ့ မယ်အကျည်းတန်စုန်းမကြီး” လို့ ပစ်ပစ်နှစ်နှစ် ဆဲသွားခဲ့တာပါ။
သူရဲ့အဆင့်အတန်းကို ပြသခဲ့တဲ့ ဖာနန်ဒိုတယောက် ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ငယ်ဘဝကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့ စပို့တင်း လစ္စဘွန်းရဲ့ တိုင်ကြားမှုကို ခံရပြီးနောက် သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်အတွက် ပြန်လည်တောင်းပန်သွားခဲ့တယ်လို့ သိရပြီး ပေါ်တူဂီအသင်းခေါင်းဆောင်ကို ဒဏ်ကြေး ယူရို ၁၄၃၀ ပေးသွားဖို့ အပြစ်ဒဏ်ပေးခံလိုက်ရပါတော့တယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်နောက်ဆက်တွဲမှာတော့ ရော်နယ်လ်ဒိုက ဘာမှတ်ချက်မှ မပေးခဲ့ပေမယ့် သူ့ရဲ့ အမဖြစ်သူ ကေတီယာ အဗီယာရိုကတော့ ” တကယ်တော့ နင်ကသာ ဝက်ဟဲ့။ ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ဘဝမျိုးကို မနာလိုစိတ်နဲ့ လိုက်မီချင်ရင် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကြိုးစားနေလိုက်ဦး။ ဒီလိုလူမျိုးကို စော်ကားတဲ့ နင့်ပါးစပ်ကိုလည်း ပလုတ်သွားကျင်းလိုက်ဦး” လို့ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြီး ရော်နယ်လ်ဒိုဘက်က မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပြလိုက်တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ေပၚတိုအသင္းရဲ႕ ေဘာလုံးပြဲအစီအစဥ္တင္ဆက္သူတဦးျဖစ္တဲ့ ဖာနန္ဒို ေဆာလ္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ခ်န္ပီယံလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ အဆိုပါေပၚတူဂီကလပ္ကို အေဝးဂိုးစည္းမ်ဥ္းနဲ႔ အေရးနိမ့္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲက ထြက္ခြာခဲ့ရတဲ့ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္တိုက္စစ္မႉး ခရစၥတီယာႏို ေရာ္နယ္လ္ဒိုကို ေအာက္တန္းက်တဲ့ ေဝဖန္မႈမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ထားခဲ့သူပါ။
အဆိုပါ ၁၆ သင္းအဆင့္ ရႈံးထြက္ပြဲစဥ္အၿပီးမွာ သူဟာ ေရာ္နယ္လ္ဒိုဆိုတာ ဝက္တေကာင္ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ေစာ္ကားမႈနဲ႔အတူ ေပၚတူဂီသားရဲ႕ မိသားစုကိုပါ ညစ္ညမ္းတဲ့ ေအာက္လုံးထိုးစကားေတြကို ဆိုရွယ္မီဒီယာမွာ တက္ေရးၿပီး လူသိရွင္ၾကား ထိုးႏွက္သြားခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
သူ႔အေနနဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တုန္းကလည္း ဘင္ဖီကာအသင္းအေပၚ အဆိုပါအမွားမ်ိဳးကို က်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးတာျဖစ္ၿပီး အခုတႀကိမ္မွာလည္း အမွတ္မရွိဘဲ အဆင့္အတန္းနိမ့္က်တဲ့ စကားေျပာဆိုမႈေတြနဲ႔ ထပ္မံေဖာင္းထုခဲ့လို႔ ေပၚတူဂီ​ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ အေရးယူမႈကို ခံခဲ့ရၿပီး နာမည္​ပ်က္သြားခဲ့ျပန္ပါတယ္။
ေဘာလုံးပြဲေၾကျငာတဲ့ မိုက္က႐ိုဖုန္းနဲ႔တင္ မေက်နပ္ႏိုင္ဘဲ မိုက္က႐ိုဖုန္းေနာက္ကြယ္မွာပါ ေသြးဆူတတ္တဲ့ သူက ” ေရာ္နယ္လ္ဒိုဆိုတာ မသတီခ်င္စရာ ဝက္တေကာင္ပဲ။ ေပၚတိုအသင္းက သူ႔ကို လက္စားေခ်ပစ္လိုက္တာ သိပ္ေက်နပ္စရာေကာင္းလွတယ္။ ကြၽန္ေတာ္အရမ္းဂုဏ္ယူပါတယ္”
” ၿပီးခဲ့တဲ့ အစြယ္က်ိဳးေနတဲ့ သူ႔အေမႀကီး ဒိုလိုက္ရက္စ္နဲ႔ က်က္သေရတုံးလွတဲ့ သူ႔မိသားစုဝင္ေတြရဲ႕ ဗြီဒီယိုေတြကို ကြၽန္ေတာ္ေစာင့္ေနပါတယ္။” ႐ိုင္း႐ိုင္းစိုင္းစိုင္း ေရးသားခဲ့သလို ေရာ္နယ္လ္ဒိုရဲ႕ မိခင္ကိုလည္း “အစြယ္တုံးေနတဲ့ မယ္အက်ည္းတန္စုန္းမႀကီး” လို႔ ပစ္ပစ္ႏွစ္ႏွစ္ ဆဲသြားခဲ့တာပါ။
သူရဲ႕အဆင့္အတန္းကို ျပသခဲ့တဲ့ ဖာနန္ဒိုတေယာက္ ေရာ္နယ္လ္ဒိုရဲ႕ ငယ္ဘဝကလပ္အသင္းျဖစ္တဲ့ စပို႔တင္း လစၥဘြန္းရဲ႕ တိုင္ၾကားမႈကို ခံရၿပီးေနာက္ သူ႔ရဲ႕လုပ္ရပ္အတြက္ ျပန္လည္ေတာင္းပန္သြားခဲ့တယ္လို႔ သိရၿပီး ေပၚတူဂီအသင္းေခါင္းေဆာင္ကို ဒဏ္ေၾကး ယူ႐ို ၁၄၃၀ ေပးသြားဖို႔ အျပစ္ဒဏ္ေပးခံလိုက္ရပါေတာ့တယ္။
ဒီျဖစ္ရပ္ေနာက္ဆက္တြဲမွာေတာ့ ေရာ္နယ္လ္ဒိုက ဘာမွတ္ခ်က္မွ မေပးခဲ့ေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕ အမျဖစ္သူ ေကတီယာ အဗီယာ႐ိုကေတာ့ ” တကယ္ေတာ့ နင္ကသာ ဝက္ဟဲ့။ ေရာ္နယ္လ္ဒိုရဲ႕ဘဝမ်ိဳးကို မနာလိုစိတ္နဲ႔ လိုက္မီခ်င္ရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ႀကိဳးစားေနလိုက္ဦး။ ဒီလိုလူမ်ိဳးကို ေစာ္ကားတဲ့ နင့္ပါးစပ္ကိုလည္း ပလုတ္သြားက်င္းလိုက္ဦး” လို႔ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ၿပီး ေရာ္နယ္လ္ဒိုဘက္က မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ျပလိုက္တာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။
ဒီနွေမှာ အီလေးဆွဲပြီး ဆန်းကြယ်လွန်းနေတဲ့ တထောင့်တညပုံပြင် အပြောင်းအရွှေ့ဇာတ်လမ်း ၈ ခု
နိုင်ငံတကာနည်းပြရာထူးနဲ့ ဘောလုံးလောကကို စပရိုက်တိုက်ဦးမှာလား အာဆင်ဝင်းဂါး